काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले सगरमाथा आरोहणमा जान लागेका महिला पत्रकारको समूहलाई रु २५ लाख सहयोग गरेको छ ।
आरोही अन्य महिलामा मेघा टेलिभिजनकी कल्पना महर्जन, राष्ट्रिय समाचार समितिकी रोशा बस्नेत, न्यूज ट्वान्टी फोरकी प्रियालक्ष्मी कार्की र स्वतन्त्र पत्रकार देउराली चाम्लिङ राई हुनुहुन्छ । आरोहण टोली बुधबार लुक्लातर्फ प्रस्थान गर्नेछ । आरोहणका क्रममा महानगरको खड्गांकित झण्डा आधार शिविरमा गाडिने छ भने सानो झण्डा र नक्शा चुचुरामा पुर्याइनेछ । उहाँहरुको आरोहण व्यवस्थापन ड्रिमर्स डेस्टिनेसन ट्रेक एण्ड एक्सिडिसनले गरेको छ । ‘समानताका लागि बुलन्द आवाज’ नारा लिएर उहाँहरु आरोहणमा जान लाग्नुभएको हो ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, बैशाख ०४, २०७५१७:२६
दूधखोलाले बगाएकी किशोरीको सकुशल उद्धार
होटल उद्घाटनमा पुगेका देउवालाई १५१ किलोको माला लगाएपछि पत्रकारसँग बोल्न मानेनन् !
बम निष्क्रिय पारियो
“धरहरा भत्कियो , विरेन्द्र रोए ” भन्दै शान्ति पूजाको तयारी !
खेल्न गएकी ६ वर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने १३ वर्षीय बालक प्रहरी नियन्त्रणमा
तीन सामुदायिक विद्यालयका २०० विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा वितरण !